कुकुर र भावनाहरु | कुकुरहरु को विश्व
कुकुरहरु र भावनाहरु
राहेल सान्चेज | | सामान्य कुकुरहरु
जो कोहीले पनि एक वा बढी कुकुरहरूसँग बाँडफाँड गर्छन् वा आफ्नो जीवन बाँडछन् उनीहरू पूर्ण रूपमा सचेत छन् कि यी जनावरहरू अत्यन्त संवेदनशील छन्। तिनीहरू सजिलैसँग हाम्रा भावनाहरू बुझ्छन्, सबैभन्दा खराब क्षणहरूमा हामीलाई सान्त्वना दिन सक्षम हुँदै। यी सबै मा असंख्य अध्ययन को जन्म भयो तिनीहरूको आफ्नै भावनाहरू र अरूहरूको पहिचान गर्ने तिनीहरूको तरिका.
1 के कुकुरसँग भावनाहरू छन्?
2 समान जानवरहरू
3 तिनीहरूले हाम्रो भावनाहरू बुझ्छन्
4 कुकुरले कस्तो भावना राख्न सक्छ?
के कुकुरसँग भावनाहरू छन्?
यी पशुहरूमा ईथोलॉजिष्टहरू, पशु चिकित्सकहरू र अन्य पेशेवर विज्ञहरूको विशाल बहुमतले कुकुरहरूले भावनाहरू महसुस गरेको छ भनेर दृढतापूर्वक पुष्टि गर्दछन्। हामीले केवल उनीहरूको आचरण अवलोकन गर्नुपर्दछ कि यो सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्न। उदाहरणको रूपमा हामी नाम, डर, आनन्द, लजालुपन, क्रोध र स्नेह राख्न सक्छौं। र यो यो हो कि उनीहरूको तर्क क्षमता हाम्रो भन्दा फरक छ, तिनीहरूले सक्छन् बुझ्नुहोस् र आफ्नो भावनाहरु देखाउनुहोस् मानव भन्दा बढी प्रभावकारी।
तिनीहरूलाई अभिव्यक्त गर्न, कुकुरहरूले आफ्नो शरीरको भाषा प्रयोग गर्छन्; हामीले भर्खरै पत्ता लगाउन ट्युन रहनु पर्छ। तिनीहरूको माध्यमबाट भौंकने र चाल भावनाहरूको एक विस्तृत विविधता देखाउनुहोस्। तिनीहरूलाई अनुवाद गर्न हामीले उनीहरूको अर्थ थाहा पाउनु पर्दछ, जुन पहिले देखिने भन्दा धेरै फराकिलो र जटिल छ। पुच्छरको स्थिति, कानहरू, टोन र बार्कको गति, यी सबैको केही उदाहरण हुन्।
समुद्री डाक्टरहरूको व्यवहार विशेषज्ञहरू कुकुरहरू जनावर हो भनेर सहमत हुन्छन् असाधारण समानुभूतिपूर्ण, जसले आफ्नो वातावरणबाट स्थिर भावनात्मक उत्तेजना बुझ्छ र उनीहरूको अनुसार प्रतिक्रिया दिन्छ। तिनीहरू हाम्रा भावनाहरूसँग "संक्रमित" हुने, हाम्रा लागि अव्यवहार्य संवेदनाहरू कैद गर्न सक्षम छन्। त्यहाँ केहि केसहरू छन् जुन केही व्यक्तिहरूमा चिन्ता वा उदासिनताले उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूलाई "मादक पदार्थ सेवन" गरेको छ।
त्यसरी नै, मानव जातिको रूपमा, उनीहरूको सिक्ने क्षमता, एकाग्रता, र उनीहरूको स्वास्थ्य समेत, निर्भर छ तिम्रो मुड। बदलेमा, यो भावनाले दृढतासाथ प्रभावित हुन्छ जुन कुकुरहरूले उनीहरूको वरिपरि महसुस गर्छन्।
तिनीहरूले हाम्रो भावनाहरू बुझ्छन्
दशकौंसम्म विज्ञानले अध्ययन गरेको जनावर र भावनाहरूबीचको सम्बन्ध हो। धेरै बर्षहरूमा तिनीहरू प्रकाशित भइसकेका छन् धेरै अध्ययन यस्तै निष्कर्षको साथ विषयमा। र तिनीहरू सबै सहमत छन् कि ठूलो वा थोरै हदसम्म कुकुरहरूसँग आफ्नो भावना र भावनाहरू हुन्छन्।
तर यो मात्र होईन। विज्ञहरू भन्छन् कि यी जनावरहरू आफैंको भावनाहरू पहिचान गर्न सक्षम छन्। यो चार वर्ष पहिले वैज्ञानिकहरूको एक टोली द्वारा गरिएको एक अध्ययन द्वारा प्रदर्शन गरिएको थियो लिंकन विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) र साओ पाउलो विश्वविद्यालय (ब्राजील)
यो अनुसन्धान गर्न, २१० कुकुरहरू मानव अनुहारहरूको छविहरूको अगाडि ती दुई फरक भावनाहरू थिए: खुशी वा क्रोध। यी छविहरूसँग रमाईलो वा चिडचिलो स्वरमा ध्वनिहरूका अंशहरू थिए। ठिकै छ, विशेषज्ञहरूले पत्ता लगाए कि जनावरहरूले बढी ध्यान दिए जब अनुहारको हावभाव आवाजसँग मिल्दथ्यो।
अध्ययनका एक लेखक कुन गुओको शब्दमा, “अनुसन्धानले देखाउँदछ कि कुकुरहरूले संवेदी सूचनाको दुई फरक स्रोतहरू समाहित गर्न र विकास गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ मानव भावनाहरूको एक स्थिर धारणा। यो संज्ञानात्मक क्षमता मानिसमा मात्र पत्ता लागेको थियो। '
कुकुरले कस्तो भावना राख्न सक्छ?
कुकुरहरुमा आनन्द र उदासी को पहिचान गर्न सजिलो छ, तर यी जनावरहरु संग गहिरो भित्री संसार छ। एथोलोजिष्टहरू र क्यानाइन शिक्षाविद्हरूले उनीहरूले महसुस गर्न सक्ने आश्वासन दिन्छन् धेरै जटिल भावनाहरु जस्तै दोषी, ईर्ष्या, वा लाज।
हामी देख्न सक्छौं कि कुकुरहरु संग राम्रो भावनात्मक बुद्धिमता छ। र त्यसकारण हामीले उनीहरूको दिमागको स्थितिमा विशेष ध्यान दिन पर्छ र तिनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये एक समावेश गर्नुपर्दछ स्नेह को राम्रो खुराक.
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुरहरु र भावनाहरु
कुकुरहरूको लागि कसैको आहार
जर्मन शर्टहेरेड कुकुरको विशेषताहरु